Tarkaanfiin “Investaroota” alaa irratti eegalame itti fufe! | Biiftuubilisummaa
← Maqaa Investerummaan Alagoota Oromiyaa fi Oromoo bitaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamuu eegale.
Sochiin Warraaqsa Ummata Oromoo tarkaanfii gurguddootti ce’uu eegale! →
Tarkaanfiin “Investaroota” alaa irratti eegalame itti fufe!
Posted on February 10, 2012	by biiftuubilisummaa
Gabasaa Saglii Wallaggaa Gur-dhala 09,2012
Godina Iluu Abbaa Boor, Aanaa Baddallee, ganda Alaabash jedhamutti omisha shankooraa lafa hektaara 15,000 irratti biqilee jiru kan qabeenyummaan isaa warshaa shukkaaraa Paakistaan ta’e gutummaan guututti ibiddaan barbadaa’eera.
Tarkaanfii kun kan fudhatame Gurraandhala, 8 ,2012 yoo ta’u qaamni ykn namni tarkaanfii kana fudhates hin beekamu jechuudhaan gabaasi nu gahe addeessa.. Tarkaanfii kanaan walqabatee Mootummaan namoota lama shakkiidhaan qabee mana hidhaatti darbuun gabaafama.
Warshaan kun hanga ammaa omisha kan hin eegalle yoo ta’u, iddoo irratti dhaabbatee jiru kanaa jiraattotni 1,200 ol akka qe’ee isaanii irraa buqqa’an waan murtaa’eef ummanni immoo torbee darbe irraa jalqabee “hin buqqaanu” jedhee mormii cimaa dhageessisaa ture jedhama. Sababiin tarkaanfii kanaas diddaadhuma kanaan akka walqabatu gabaafameera.